Anjanahary: nanatitra fanampiana ny traboina ny CUA | NewsMada
Anjanahary: nanatitra fanampiana ny traboina ny CUA
Par Taratra sur 22/08/2018
Tonga niombona alahelo sy namangy ary nitondra ny voatsirambin’ny tanana ny kaominina Antananarivo Renivohitra, omaly, ho an’ireo niharam-boina tratran’ny haintrano, ny alatsinainy teo etsy Anjanahary IIS, boriborintany fahadimy.
Nanome vary dimy gony, menaka ary savony ho an’ireo fianakaviana niharam-boina avy amin’ny ben’ny Tanàna Ravalomanana Lalao ny kaominina. Tonga nitarika ny delegasiona teny an-toerana ny lefitry ny ben’ny Tanàna sy ny delegen’ny boriborintany fahadimy ary ireo mpiara-miasa.
Araka ny voalazan’ny tompon’andraikitra eny an-toerana, pitik’afo nankany amin’ny moto no niandohan’ny afo ka niitatra tamin’ny tokantrano hafa. May tsy nisy noraisina tamin’izany ny trano hazo 10 tafo izay nahitana tokantrano fito ary traboina 20 mahery.
Maty tamin’izany ny telo mianaka. Marihina fa fianakaviana iray daholo ireo tokantrano fito ireo.
Nanomboka tamin’ny 10 ora alina ny alatsinainy teo no nanomboka ny firehetan’ny afo.
Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina raha vao naharay ny antso na nisy aza ny fahasarotana tamin’ny fidinana teny an-toerana.